Soomaaliya, 18 May 2018
Khamiis 18 May 2018
Duqa magaalada Sheffield ee dalka Britain, ayaa waxaa loo doortay Majid Majid, oo ka soo jeeda Soomaaliya. Sidoo kale, Kaltum Osman oo iyana ah gabar Soomaali ah ayaa loo doortay xubin ka tirsan golaha deegaanka magaaladaas.
Dad ku dhintay roobab ka da'ay Puntland
Laba qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa la la’yahay kadib markii uu qaaday daad ka dhashay roobab xooggan oo illaa xalay ka da’ayay deegaanada Puntland.
Roobab dabaylo wata oo ka da'ay Somaliland
Roobab dabaylo aan badnayn watay ayaa illaa xalay ka da’ay inta badan magaalooyinka Somaliland, kuwaas oo keenay in dadka ku nool magaalooyinka xeebuhu ka durkaan badda.
Faaqidaadda: Xaaladda gobolka Soomaalida Ethiopia